डा.सुनिल शर्माद्वारा ८४ बर्षीया बेसहारा बृद्धालाई उद्धार गरी निःशुल्क उपचार (भिडियोसहित) - SangaloKhabar
पाख्रीवासकी सावित्रा बनिन् पहिलो मिस धनकुटा
मिस धनकुटा फाईनल : कसले पहिरिएला ताज ?
हिलेमा बनाईयो बुद्धपार्क
चार तलाबाट खसेका विकलाई नोबेलले बचायो
उदयपुरबाट बलात्कार आरोपमा एक जना पक्राउ
तोलामा ७ सय रुपैयाँले बढ्यो सुनको भाउ
धरानबाट लागुऔषध र हतियारसहित एक जना पक्राउ
दाईजो नल्याएको भन्दै बिराटनगरकी रञ्जुदेवीको जोगबनीमा हत्या, श्रीमानसहित चार जना पक्राउ
धनकुटामा दशैंलाई बिदाई गर्दै कांग्रेसले गर्यो चियापान
२ खर्बको लागतमा तमोर र माडी खोला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने
डा.सुनिल शर्माद्वारा ८४ बर्षीया बेसहारा बृद्धालाई उद्धार गरी निःशुल्क उपचार (भिडियोसहित)
बिराटनगर। ८४ बर्षको बृद्धा अवस्था, त्यसमाथि एक बर्ष अघिदेखि बिरामको पीडा । घरमा कोहि छैनन् र भएका आफन्तले पनि साथ नदिदा बेलवारी–४ काकुमकी बृद्धा कलमाया खड्काका लागि जिन्दगी ‘घाँडो’ भईसकेको थियो । जिन्दगीदेखि हरेस खाईसकेकी बेसहारा खड्काका लागि नोबेल शिक्षण अस्पताल सञ्चालक डा.सुनिल शर्मा सहारा बनेका छन् ।
बृद्धा अवस्थामा रोगले थलिदा पनि उपचार गर्ने पैसा नभएर तड्पिरहेको खवर पाएपछि डा.शर्माले उनको उद्धार गरेका छन् । बृद्धाको उपचारका लागि डा.शर्माले घरमै डाक्टरको टोली पठाए । गंभीर बिरामी परेकी उनलाई घरमा प्राथमिक उपचार गरी थप उपचारका लागि नोबेल अस्पताल ल्याएर डा.शर्माले निःशुल्क उपचार गराएका हुन् । उनलाई एक बर्ष अघिदेखि खोकी लागिरहने, शरिर सुनिने र श्वास फेर्न गाह्रो हुने समस्या थियो ।
नोबेल अस्पतालमा निःशुल्क औषधि उपचारका साथै खाना, खाजासहित आवश्यक सम्पूर्ण बन्दोबस्ती मिलाएर उनको उपचार गरिएको हो । उपचारपछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ ।
बिरामी हुँदा पनि सहारा दिने कोहि नभएर मृत्युको मुखमा पुगिसकेका बेला डा.शर्माले उपचार गराएर ठुलो गुन लगाएको भन्दै उनी अहिले दंग छिन् । ‘अव मेरा दिन यत्ति मात्रै रछन भन्ने लागेको थियो । सुनिल शर्मा जस्तो धर्मात्मीले उपकार गर्दिनाले मर्न लागेकी म बुढीले पुर्नजन्म पाए ।’ उनले भनिन् ।
निसन्तान कलमाँयाको साथमा अहिले कोहि छैनन् । २६ बर्ष अघिनै श्रीमानको निधन भयो । अरु कोहि आफन्त पनि साथमा नहुँदा उनी बेसहारा छिन् । ८४ बसन्त पार गरिसकेकी उनी छियाछिया भईसकेको झुपडीमा बस्छिन् । केहि काम गर्न सक्दिनन् ।
बृद्धभत्ताबाट आएको रकमले जेनतेन जाउलो खाएर जिविका चलाउँछिन् । तर, बिरामी भएर उठ्नै नसकेका वेला उपचार गर्ने पैसा त कता हो कता तातोपानी तताएर दिने मान्छेसमेत नहुँदा उनको बिजोग भएको थियो ।
स्थानीय महेन्द्र सुवेदी, राजेन्द्र अधिकारी, चन्द्र लिम्बु लगायतले डा.शर्मालाई उनको दयनीय अवस्था बताएर उद्धारमा सहयोग गरेका थिए । करिव दुई हप्ताको उपचार पश्चात निको भएर उनी अहिले घर फर्किएकी छन् । समाजसेवामा सक्रिय डा. शर्माले उनी जस्ता धेरै गरिव, बिपन्न तथा असहाय बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गरेर ज्यान बचाएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ ०६, २०७६ समय: १०:४९:१८
धनकुटा । पाख्रीवासकी साबित्रा घिमिरेले मिस धनकुटाको उपाधि जितेकी छन् । गएराति सम्पन्न फाईनलमा २७ जना प्रतिस्पर्धिलाई उछि...
धनकुटा । धनकुटामा पहिलो पटक सञ्चालित सुन्दरी प्रतियोगिता ‘मिस धनकुटा’ को बिजेता आज घोषणा गरिदैछ । धनकुटा–७ स्थित त्रिवेण...
धनकुटा । धनकुटाको हिले बजारमा बुद्धपार्क निर्माण गरिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले हिलेको न्यूरोड...
बिराटनगर । चार तला माथिबाट खसेर मरणासन्न अवस्थामा पुगेका धरानका देव विकलाई परिवारका सदस्यले बचाउँन सक्ने आश मारिसकेका थि...
उदयपुर। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका-८ का २७ बर्षीय सत्य सदा जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । उनले २५ गते रा...
काठमाण्डौ । सुनको भाउ तोलामा ७ सय रुपैयाँ बढेको छ । सुन मंगलबार तोलाको ७० हजार ७ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँ...